Jery taratra… | NewsMada
Par Taratra sur 24/07/2021
Nilaza ny tonia mpampanoa lalana eo anivon’ny fitsarana ambony fa voasambotry ny mpitandro filaminana ireo teratany vahiny sy ny teratany malagasy ahina ho voarohirohy nikasa hamono ny filohan’ny Repoblika. Efa ao anatin’ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana noho ny fanohintohinana ny filaminam-bahoaka.
Nanazava ny eo anivon’ny Polisim-pirenena fa olona enina ny voasambotra ny amin’izay raharaha fanonganam-pnjakana izay. Teratany frantsay ny iray, teratany malagasy mizaka ny zom-pirenena frantsay ny roa, ary Malagasy telo hafa. Nisy ny fisavana trano, ary nahatrarana vola 900 tapitrra Ar sy fitaovam-piadiana mahery vaika.
Ranolava ny famoahana fanambarana avy amin’ireo andrimpanjakana manameloka ny fanonganam-panjakana. Eo koa ireo avy amin’ny hery politika manohana sy miara-dia amin’ny fitondrana. Misy amin’izany ny milaza fa tsy sarimihetsika ny raharaha, matoa ny eo anivon’ny fampanoavana ambony no namoaka izany.
Nilaza ny minisitry ny Fitsarana fa tsy zava-dehibe ny fialany na tsia fa fiaraha-mikaroka izay hampandrosoana ny firenena no atao. Misy ny kolikoly matoa nataon’ny filohan’ny Repoblika ho laharam-pahamehana ny ady aminy. Mahatonga kolikoly ny tsy fahalalan’ny olona ny fandaharana ny raharaham-pitsarana.
Famotsoran-keloka iray ny neken’ny CFM tamin’ny fangatahana telo, ary ny fanonerana amin’ny asa 14 no nankatoavina tamin’ny fangatahana 21. Amin’izany, notanan’ny CFM ho tsiambaratelo ireo nahazo famotsoran-keloka. Misy ny fifanatonan’ireo amin’ny ankolafin-kery rehetra fa tsy tokony hisy ny savorovoro politika.
Amin’izany rehetra izany, mafanafana ratsy ny toe-draharaham-pirenena? Mila filaminana sy fitoniana…